Sida loo tirto faylasha kharribeen gabi ahaanba ka your computer
File A kharribeen waa file dhaawacan computer oo ku guul daraysata in la furo ama khaladaad qaar ka mid ah muujiyaan marka aad isku daydo in la furo. File A kharribmay your computer aad burburi karaan drive adag iyo seenyada loo xaaladda ugu xun yahay waxa ay keeni kartaa in xogta qiimaha badan. Mararka faylasha kharribeen la soo kabsaday karaa laakiin mararka qaarkood faylasha waxay noqon karaan kuwo aan macquul ahayn si uu u xaliyo sidaas buriyay aan waxtar lahayn.
Waxaa jira qaar ka mid ah fursadaha in loo isticmaali karaa in la tagaan xogta ku kharribeen. Habka ugu fudud yahay inay reboot your computer oo isku day in aad tirtirto faylasha musuqmaasuq. Waxa kale oo jira laba qof oo ah free qalab unlocker online oo kaa caawin doona inaad arinkan.
Sababaha files noqon kharribeen
Kabsado files corupted
Delete files kharribeen
Waxaa jira dhowr sababood sharraxaya sababta aad files noqon kartaa kharribeen at hal dhibic ama mid kale. Waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay
i. Jiritaanka furin ama cillad ee software-ka loo isticmaalaa in lagu xukumid ama abuuro faylka.
ii. Power khasaaro ama arrimo kale oo la xidhiidha awoodda
iii. Xiritaanka ahayni sida ciidanka xidho ama sababtay korantada
iv. Maahan kuwo ka drives adag iyo warbaahinta kale kaydinta ka hor si fiican iyaga goynta.
v. barnaamijyada xun gaar ahaan haddii ay keentey in qeybtii adag.
Qaar ka mid ah files musuqmaasuq la hagaajin karin ama soo kabsaday. Erayga wuxuu ku siin doonaa laba fursadaha suurto gal ah in la furo aad file musuqmaasuq. Labadan fursadaha u furan oo Dayactir file ah oo furan la Converter Recovery Text . Day Marka hore mid ka mid ah laba doorasho ka hor inta aadan isticmaali doonaa karaa kale oo kale.
Haddii aad file ma furi kartid ka dib markii la isticmaalayo laba doorasho, waxaa lagu talinayaa in aad isticmaasho software kabashada xogta sida Wondershare Data Recovery , Recuva Recovery iyo wixii la mid ah. Hubi in aad badbaadin karaan faylasha aad qaali u ah ka hor inta aadan ka fiirsan iyaga la tirtiro.
Sidee inuu ka soo kabsado files kharribeen isticmaalaya Wondershare Data Recovery
Si aad u soo kabsado aad files kharribeen isticmaalaya Wondershare Data Recovery, raac talaabada hagitaan talaabo talaabo hoos ku qoran
Step1. Doortay hab soo kabasho
Marka hore, soo bixi software Wondershare Data Recovery si aad u computer oo ku xidh. Burcad barnaamijka mar lagu rakibay. Laga soo bilaabo hab afar-kabashada soo bandhigay, mid la doortay, kuwaas oo kaa caawin doona, kabsado faylasha aad. Si kastaba ha ahaatee computer si toos ah idinku hanuunin galay Wizard hab kabashada.
Step2 Dooro nooca file in la soo kabsaday
Halkan, dooro nooca file aad rabto inuu ka soo kabsado ka bilowda Cajalado, video, waraaqaha xafiiska, sawiro, iyo kaydka. Waxa kale oo aad dooran kartaa haddii dhammaan faylasha aad dooni inuu ka soo kabsado waxaa lagu soo kor firdhin noocyada faylka. Dooro noocyada file iyo riix Next in la sii wado in tallaabada xigta.
Step3. Sheeg meesha uu
Aqoonso meesha ama folder meesha aad faylasha aad ka fursadaha siiyo badiyay. Haddii aadan hubin goobta saxda ah, dooro Computer in ay oggolaadaan in barnaamijka si scan for files aad.
Step4. Sawirka aad files lumay
Sahlo baaritaan qoto dheer si ay u oggolaadaan soo kabashada aad file lumay oo riix badhanka Start on. Waqtiga ay qaadato ku xiran tahay tirada files in la soo kabsaday. Haddii kale geeddi-qaadataa waqti gaaban.
Step5. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan faylasha lumay
Laga soo bilaabo natiijada scan soo bandhigay, maraan files ka soo kabsaday iyo hubiyo in dhamaan faylasha aad rabto inuu ka soo kabsado ayaa laga helay. Waxa kale oo aad kala shaandhayso karaa natiijada in ay oggolaadaan in Saliibiyiinta deg deg ah ku faylasha. Riix soo kabtaan ka dib previewing inuu ka soo kabsado faylasha kharribeen.
Wondershare Data Recovery Waa software weyn kabashada file sidaas daraaddeed waxaa jaaniska sare in files kharribeen u soo baxo. Haddii faylasha kharribeen ayaa overwritten inta ay socoto, ka dibna aad fursadaha helitaanka dib faylasha aad qaali u noqon doonaa wax macquul ah.
Sida loo helo iyo tirto faylasha kharribeen (haddii ay lama hagaajin karo)
Step1.Remove files iyo tirtirto folder
Dhaqaaq oo dhan files ee folder la file qufulan. Gacanta tirtirto folder la files guurtada ah ka dib markii aad u guurtay faylasha kale. The files guurtada waa files kharribeen.
Step2. Close Windows Explorer
Haddii gal ma tirtirto, xidho Explorer Windows . Si aad u xirto Windows Explorer, bilaaban tababare Task ay xaq u gujinaya ka bar Task iyo xulashada Tababaraha kooxda Task ka menu.
Step3 End hawsha
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyada oo liiska barnaamijyada socda ee Windows Explorer. Midig u guji on Windows Explorer iyo End dooro Task ka fursadaha siiyo.
Step4. Guuleysatey your computer
Ka dib marka aad isku qabteen Windows Explorer, computerka aad iyo aad u hubiso in files kharribeen ayaa la tirtiray.
Waxyaabaha ay is ogow of marka files kharribeen
a. Marka musuqmaasuqa xogta u dhaqmaan hab u jirto siday suuragal u yar yahay waxaa ka mid ah la beddelayn, tirtirto xogta sida la wadarta adag ama fiiri wadarta taas oo inta badan loo isticmaalo tirka khaladaad. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa in ay saxaan oo isticmaalaya furayaasha qalad saxo.
b. Marka files kharribeen waa mid aad u muhiim ah, uma baahnid in aad si degdeg ah markiiba la files samayn, isku day inaad si qamaar arrinta oo bal eega, haddii aad soo kaban karto xogta.
c. Kaabta intiisa kale ee xogta si looga fogaado in dheeraad ah gaar ahaan haddii sababta files kharribeen waxaa sabab u ah cayayaanka ah ee kombiyuutarka.
Sida loo ka jecel Your Web Browser Delete Kukiyada
3 Siyaabaha tirtireyso shil delete
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray / Khasaaray Sawiro
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado ama tirto faylasha kharribeen gabi ahaanba ka your computer